30 / 06 / 2021 30 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 210 Views စာ0မှတ်ချက် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments, 21319 ဗဟို Perk, 21327 လက်နှိပ်စက်, 40490 NINJAGO 10 နှစ်မြောက် BrickHeadz, 5006746 လွှဲသင်္ဘောစီးနင်း, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, BrickHeadz, Friends, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Ideas, Lego, Lego BrickHeadz, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Friends, Lego Ideas, Lego Ninjago, LEGO.com, Ninjago, လွှဲသင်္ဘောစီး, အဆိုပါ LEGO Group
ယနေ့လက်ဆောင်သုံးခုနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းကိုသင်၏နောက်ဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည် LEGO.comတစ်ဦးအပါအဝင် Ninjago အစုံနှင့် Friends-themed ခွက်။
40490 Ninjago 10th နှစ်မြောက် BrickHeadz, 5006746 လွှဲသင်္ဘောစီးနင်းနှင့်ပုံနှိပ် Friends ခွက် (သော sitcom မဟုတ်ဘဲ Lego (Theme) သည်ဇွန်လ ၃၀ ရက်၊ ယနေ့ကစားပွဲအဆုံးအထိသာရနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အသစ်ထွက်ရှိသည့်စတိုးဆိုင်များတွင်ဝယ်ယူမှုတစ်ခုတည်းကိုသာကိုင်တွယ်သည်။ 21327 လက်နှိပ်စက် - မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်နှစ်ဆတိုးရန်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် 5006746 Swing Ship Ride သည်ပေါင် ၈၅ / ယူရို ၈၅ နှင့် ၄၀၄၉၀ တို့တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည် Ninjago 10th နှစ်မြောက် BrickHeadz အပေါ်£ 10 / € 10 ဖြုန်းစဉ်£ 85 / € 85 များအတွက်ရှိနိုင်ပါသည် Ninjago အစုံ။ ဝယ်ခြင်း (ဥပမာ) ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် ထို့ကြောင့်သင့်အားပွဲခင်းအစုံအားသင့်အားအခွင့်ပေးသကဲ့သို့၊ Lego Group ၏ပထမဆုံးပေးချေမှုနှင့်ဝယ်ယူမှုပုံစံ။
အဆိုပါ Friends ခွက်သို့သော်အဘို့နှင့်သာရရှိနိုင်ပါသည် 21319 ဗဟို Perkမရ။ သင်မကြာသေးမီကဖြန့်ချိခဲ့သောရှေ့ပြေးနိမိတ်ကိုမကောက်ရသေးပါ 10292 အဆိုပါ Friends Apartmentsယခုအချိန်သည်မည်သည့်အချိန်ကဲ့သို့မဆိုကောင်းသောအချိန်ဖြစ်သည် (၎င်းကိုသင်ဖတ်နိုင်သလောက် ၀ ယ်ယူခြင်းသည်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်).
အဆိုပါ Lego ကျန်ရှိသောထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသည် ၄၀၄၉၀ ကို Group မှအတည်ပြုခဲ့သည် Ninjago 10th နှစ်မြောက် BrickHeadz လာမည့်လမှသီးခြားဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကျန်ရှိနေသော GWP သုံးမျိုးအနက် ၅၀၀၆၇၄၆ Swing Ship Ride နှင့် the GWPs တစ်ခုဖြစ်သည် Friends ခွက်များကိုရောင်းချပြီးဖြစ်သည် - ၎င်းသည်စျေးကွက်အားလုံးတွင် ၀ ယ်ရန်အသင့်ရှိခြင်းကိုကောင်းစွာနိမိတ်ပြသည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအတည်ပြုပါလိမ့်မယ် ယခုအဘို့, ထိုအလုပ်ကိုထောက်ပံ့စဉ်းစားပါ Brick Fanatics ကျွန်ုပ်တို့၏မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို အသုံးပြု၍ ဤလက်ဆောင်များကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← နောက်ဆုံး LEGO BrickLink ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်သည်နောက်ဆုံးတွင်“ ထုတ်လုပ်မှုအဆင်သင့်” ဖြစ်သည်
Lego Ideas ဒီဇိုင်နာသည်နောက်ဆုံးပေါ်ငွေစုအစီအစဉ်သို့ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်သည် →